आन्द्रा को पारगमन सुधार गर्न5खानाहरु बेजिया
टोय टोरेस | 13/09/2021 16:00 | पोषण
राम्रो आन्द्रा को पारगमन हुनु राम्रो स्वास्थ्य को आनन्द को लागी आवश्यक छ। किनभने शरीर बाट फोहोर हटाउन आवश्यक छ ताकि सबै कुरा हामी भित्र सही ढंगले काम गर्दछ। र कब्जियत विभिन्न नसहरु को सूजन को रूप मा विभिन्न विकारहरु को कारण हुन सक्छ, राम्रो संग बवासीर वा गुदा विदर को रूप मा जानिन्छ, अरु को बीच। तेसैले, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि स्वाभाविक रूप बाट मल को माध्यम बाट अपशिष्ट पदार्थ को पक्ष मा।
आन्द्रा को पारगमन सुधार गर्न को लागी, यो एक विविध, सन्तुलित र स्वस्थ आहार को पालन गर्न को लागी आवश्यक छ। फाइबर एक पौष्टिक तत्व हो जसले सबैभन्दा धेरै मद्दत गर्दछ, तर मात्र एक मात्र होइन, किनकि अन्य जस्तै किण्वित खाद्य पदार्थ, हाइड्रेशन वा बोसो पारवहन को पक्ष मा छन्। यदि तपाइँ पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ कि तपाइँको आन्द्रा को पारगमन कसरी सुधार गर्ने हरेक दिन खाली र यस प्रकार तपाइँको स्वास्थ्य मा सुधार, तपाइँ आफ्नो आहार मा यी खाद्य पदार्थहरु लाई समावेश गर्नु पर्छ.
1 आंत्र आवागमन कसरी सुधार गर्ने
1.2 हरियो सिमी
1.4 अतिरिक्त कुमारी अलिभ तेल
1.5 फ्लेक्स र चिया बीउ पेट को पारगमन सुधार गर्न को लागी
आंत्र आवागमन कसरी सुधार गर्ने
खाना को अतिरिक्त, हाइड्रेशन यस समीकरण मा एक प्रमुख भूमिका खेल्छ। पाचन प्रणाली धेरै कार्यहरु छन् र ती मध्ये एक मल को गठन शरीर बाट फोहोर हटाउन को लागी हो। यी रूप को रूप मा, ठूलो आंत पानी हटाउँछ र यस प्रकार कडा हुन्छ। जब शरीर पर्याप्त हाइड्रेटेड छैन, मल धेरै कडा र सुक्खा हुन्छ र यो पास गर्न गाह्रो हुन्छ.
हाइड्रेशन को कमी मुख्य कारणहरु मध्ये एक हो कब्ज, तेसैले यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ राम्रो बानीहरु लाई अपनाउन को लागी आन्दोलन को एक खराबी बाट बच्न। जब यो हुन्छ, मल दुखाइ, बवासीर, गुदा fissures, र कब्ज को विशिष्ट पेट असुविधा देखा पर्न सक्छ। एक दिन २ लिटर पानी पिउनाले तपाइँ आन्द्रा को पारगमन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ, तपाइँको आहार मा यी खाद्य पदार्थहरु को अतिरिक्त को लागी.
फाइबर को प्राकृतिक स्रोत, भिटामिन र खनिज, फलहरु को खाना हो कि कुनै पनि स्वस्थ आहार मा हराउन सक्दैन। यातायात सुधार गर्न को लागी, सबै भन्दा राम्रो कीवी, बेर, सुन्तला र स्याउ हो। कीवी विशेष गरी मानिसहरु जो नियमित कब्ज बाट पीडित को लागी एक अत्यधिक सिफारिश गरिएको खाना हो। यो फल घुलनशील फाइबर मा धनी छ र बारी मा एक प्राकृतिक prebiotic छ। नाश्ता को लागी हरेक बिहान2कीवी छ र तपाइँ एक नियमित यातायात हुनेछ।
सामान्यतया तरकारी र तरकारीहरु एक स्वस्थ आहार मा आवश्यक छ, किनकि उनीहरु फाइबर, भिटामिन र खनिजहरु मा धनी खाद्य पदार्थ हो कि मानव शरीर को उचित कार्य को लागी धेरै महत्वपूर्ण छन्। तर यदि त्यहाँ एक विशेष गरी सिफारिश गरिएको तरकारी हो यातायात सुधार गर्न को लागी, यो हरीयो बीन्स हो। यी हुन् घुलनशील फाइबर मा धनी, जसको मतलब यो आन्द्रा microbiota को लागी एक खाना हो.
सामान्य मा, सम्पूर्ण अन्न राम्रो आंत समारोह को लागी आवश्यक छ, तर यसको धेरै लाभ को लागी विशेष गरी जई। ती मध्ये, रोल्ड जई घुलनशील फाइबर मा धनी छन्, जसको मतलब यो एक प्राकृतिक prebiotic को रूप मा कार्य गर्दछ। तपाइँ ओट फ्लेक्स लिन सक्नुहुन्छ नाश्ता मा, दही संग वा तपाइँको मनपर्ने सब्जी क्रीम मा.
तरल सुन को रूप मा दुनिया भर मा परिचित, हाम्रो अतिरिक्त कुमारी जैतून का तेल सबैभन्दा पोषण सम्मानित खाद्य पदार्थ मध्ये एक हो। पाचन प्रणाली को लागी यो आवश्यक छ, किनकि यो fecal बोलस लुब्रिकेटेड राख्छ र यो गुदा को माध्यम बाट यसको निष्कासन को पक्षपात गर्दछ। निस्सन्देह, तेल लिनु पर्छ सलाद मा चिसो वा तरकारीहरु को स्वाद थप्न को लागी, चिसो अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल को एक दिन को4र6चम्मच को बीच एक सही आन्द्रा को पारगमन को लागी पर्याप्त छ।
फ्लेक्स र चिया बीउ पेट को पारगमन सुधार गर्न को लागी
उनीहरुलाई स्वास्थ्य को लागी धेरै लाभदायक गुणहरु को लागी सुपर फूड को रूप मा मानिन्छ। ती मध्ये आन्द्रा को पारगमन सुधार को सम्पत्ति हो। जब बीउ भिजेको हुन्छ, Mucilage भनिने बिरुवा पदार्थ छोड्नुहोस्। यो पदार्थ आंत सफाई को लागी जिम्मेवार छ र आन्दोलन लाई बढावा दिन्छ।
आफ्नो आहार मा यी खाद्य पदार्थहरु को रूप मा, साथ साथै अन्य धेरै स्वस्थ र आवश्यक खाद्य पदार्थ जस्तै डेयरी, जनावर र सब्जी प्रोटीन, फलफूल वा बोसो को रूप मा, तपाइँ आफ्नो दिनचर्या मा हरेक दिन एक सानो शारीरिक गतिविधि शामिल गर्नुपर्छ। व्यायाम आन्दोलन लाई बढावा दिन को लागी आवश्यक छ आन्द्रा। छोटो मा, हाइड्रेशन, पोषण र व्यायाम राम्रो आंत स्वास्थ्य को लागी कुञ्जी हुन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » पोषण » आन्द्रा को पारगमन सुधार गर्न5खानाहरु